ကွတ်ကီး - ကွတ်ကီး | Apg29
ကွတ်ကီး - ကွတ်ကီး
Apg29 cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါ Apg29 surfing နှင့်၎င်း၏ features တွေကိုအသုံးပြုဖို့အားဖြင့်, သင် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းသဘောတူသည်။
Apg29 cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဆှီဒငျတွင် cookies ။ စာမကျြနှာကိုကောင်းစွာနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်အဘို့အဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအမှုအရာတို့ကိုသူများထဲတွင်သင်မှတ်ချက်များ၏ပုံစံအတွက် cookies တွေကိုဒေသအလိုက်သင်ကသင်တစ်ဦးမှတ်ချက်ရေးဖို့အခါတိုင်းဖြည့်ကြဘူးဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နာမကိုအမှီနှင့် e-mail ကိုကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်နဲ့ name ကို (သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအမည်) အများပြည်သူသိသာမဟုတ်ကြောင်း database ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ကွတ်ကီးလည်း Google ကစာရင်းဇယားဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။
ကွတ်ကီးသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဒေသအလိုက်သိမ်းထားသည့်သေးငယ်တဲ့ဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသင်စားနိုင်မယ့်ကိတ်မုန့်ဘူး။ ;) သင်ကသူတို့ကိုချင်သို့မဟုတ်မဖြစ်စေ, သင်တို့သည်ဤဖိုင်တွေအလုပ်လုပ်ချင်သလဲဆိုတာသင့် browser သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကရည်ရွယ်အဖြစ်စာမျက်နှာအလုပ်မလုပ်သောစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်အဖြစ်လုံးဝ tool ကိုပိတ်ထားပါ။
အပေါ်ဥပဒေ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေး ပြီးသား, အသုံးပြုသူများ cookies တွေကို၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးရမည်ဖြစ်သည် - တစ်နှစ်ကြာအစောပိုင်းကဇူလိုင်လ 1, 2011 ပြောင်းလဲသွားတယ်, အစိုးရကအချက်အလက်များကိုသာကနေပြန်ထုတ်နှင့်အသုံးပြုသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ terminal ကိုသုံးစက်ကိရိယာများအတွက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုချက်နှင့်အတူမြို့သို့ရောက်လေ၏။
cookie ကိုဥပဒေနှင့်အဆဲအခန်း6- ကဖွင့်သော်လည်းကောင်းထံမှကောက်ယူသို့မဟုတ်မိမိတို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားကြောင်းအချက်အလက်များ၏စားသုံးသူအကြောင်းကြားရန်အတော်လေးအလုံအလောက်မဖြစ်မီ။ 18 §ကြောင့်ယခုစားသုံးသူကိုလည်းသတင်းအချက်အလက်ထံမှထုတ်ယူသို့မဟုတ်မိမိတို့၏ Device များပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားကြောင်းသဘောတူရုံစားသုံးသူအကြောင်းကြားဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ပညတ်တရားသည်တဦးတည်းရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်အရာကိုအသိပညာပေးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ Cookie ။
သင်, cookies များကိုအကြောင်းကိုအောက်ကအချက်အလက်အလံကိုပယ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါက "ငါနားလည်" နှင့် Apg29 surfing ကိုဆက်လက် click နှိပ်နိုင်ပါတယ်။
ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ် သင်အောက်ကမှတ်ချက်တွေ၌ဤသို့မဟုတ်ရေးသားမှုအပေါ်မေးခွန်းများကိုရှိပါက။
ဘလော့ဂ် site ကို Apg29.Nu သွားရောက်လည်ပတ်ဘို့ Thank you!